Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray iPhone Kalandarada
> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Kalandarada on iPhone (6s iPhone mid)
The Recovery iPhone Calendar Software Best: Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Khasaare xog muhiim ah oo ka iPhone (oo ay ku jiraan iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus) waa wax aan loo dulqaadan karin, in kastoo ay jiraan sababo numerable in ay keeni karaa. Waa hagaag, aad walwal khasaaraha xogta soo afjari karo halkan hadda. Arrinta No aad lumay ay sabab u tahay tirtirka shil ah ama qalab jebiyey, waxaa jira saddex siyaabood oo aad u soo shaqeeyaan, waxa laga baarayo aad iPhone (macruufka 9 ka mid ah), waxaa Macdan aad gurmad Lugood iyo soo kabsado aad gurmad iCloud.
Sameynta hab this, waxaad u baahan tahay in ay ku tiirsan yihiin qalab-saddexaad: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Mac) . Labada barnaamijba ogolaan in aad ka bogsato jadwalka iPhone tirtiray kaliya 3 tallaabo: iskaan, eegis iyo soo kabsado. Hadda, download version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah si ay leeyihiin isku day ah oo hore.
Maxaad Dooro Wondershare Dr.Fone ee macruufka
3 jidadkooda Data Recovery
Xulo caleenta iyo dib u soo ceshano xogta laga qalabka macruufka, hayaan iCloud iyo Lugood (oo ay ku jiraan kuwa Windows XP).
Kabsado Ilaa 18 File Noocyada
Kabsado xiriir, SMS, sawir, videos, note, wac log, jadwalka taariikhda, farriinta, qoraal cod, xogta app, iwm
Ee dhamaan macruufka Devices
La jaan qaada ee macruufka dambeeyay 9 iyo taageerada iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS, oo dhan iPad iyo iPod xiriiri 5.
Safe oo fudud in la isticmaalo
Khatarta lacag la'aan ah oo dadka oo dhan oo keliya qaban karaa sida 1-2-3, xirfad farsamo oo loo baahan yahay oo dhan ma.
Sida loo isticmaalo Wondershare Dr.Fone ee macruufka inuu ka soo kabsado tirtiray Kalandarada ka iPhone
Qeybta 1: Ladnaansho tirtiray Kalandarada si toos ah uga iPhone (aad marka aanad lahayn wax raad raac ah)
Qeybta 2: Waraaqda kaabta Lugood inuu ka soo kabsado iPhone Kalandarada (marka aad leedahay raad raac Lugood ah)
Qeybta 3: ka ee kaabta iCloud Ladnaansho iPhone Kalandarada (marka aad leeyihiin gurmad iCloud ah)
Qeybta 1: Ladnaansho tirtiray Kalandarada si toos ah uga iPhone (macruufka 9 taageeray)
Si toos ah u soo ceshano jadwalka tirtiray ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS.
Tallaabada 1. Run barnaamijka iyo xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka. Ha Cararina Lugood marka aad tan u sameeyaan.
Tallaabada 2. Click on the Start Scan badhanka si ay u bilaabaan aad ka baareyso iPhone ka dib markii uu ogaan barnaamijka.
Tallaabada 3. scan ka dib, waxaad ku eegaan karo xogta laga helay oo iyaga ka soo kabsado ka mid ah.
Qeybta 2: Waraaqda kaabta Lugood inuu ka soo kabsado iPhone Kalandarada
Kabsado wax kasta oo aad rabto in aad ka Lugood gurmad u dhammaan qalabka macruufka.
Tallaabada 1. Dooro habka soo kabashada oo ka mid ah ka soo kabsado Lugood ee kaabta File dusheeda ka dib markii socda software ah.
Tallaabada 2. Dooro faylka gurmad u ah iPhone iyo riix Start Scan badhanka si ay u soo saaro.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh content ee file gurmad ah oo dhan iyo sax wax kasta oo aad rabto. Markaas riix Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Qeybta 3: ka ee kaabta iCloud Ladnaansho iPhone Kalandarada
Gurmad Access iCloud in ay ku eegaan iyo eegista soo kabsado xog kasta oo aad rabto.
Tallaabada 1. Dooro habka soo kabashada ee ka soo kabsado iCloud File kaabta ka dib markii uu bilaabay barnaamijka.
Tallaabada 2. Login ID Apple aad, doorato faylka raad raac ah oo aad iPhone inaad kala soo baxdo oo soo saaro.
Tallaabada 3. Dhammaan xogta ku gurmad la previewed karo ka dib markii fiirsato. Dooro wax kasta oo aad rabto oo u badbaadin on your computer.
Talooyin: Marka icon Calendar ka maqan on iPhone ee guriga screen
Oo hadlaya Guud, Calendar waa app-urursiga ee ku iPhone, taas oo aan la maqan ahaantiisa ah. Haddii ay taasi dhacdo, waxaad u baahan tahay inaad marka hore eegto aad iPhone, ma si aad u baahan tahay in la sameeyo goobo dheeraad ah oo ku saabsan iPhone. Maxaad samayn kartaa maqan ee Calendar? Read liiska hoos ku qoran.
1. Check galalka aad iPhone: Tani waxay ka iman waa in marka hore. Waa wax fudud in la jiidayo icon galay gal ah in aad la abuuro in ay kala walxood oo kala duwan oo ku saabsan iPhone. Marka ay dhacdo ay ficil ula kac ahayn, waa mid aad u fudud in ay iska eafiya iskana. Haddaba waxaa loo hubiyo si taxadar leh iyo in la hubiyo in icon Calendar si dhab ah loo maqan.
2. Guuleysatey aad iPhone: From badan oo waayo-aragnimo ah ee isticmaala iPhone, howleheedii runtii xallin karaa cayayaanka yar yar ee iPhone. Waa kuma yeeli doonaa wax qalab. Just siin isku day ah oo aad ka hor doonaya xal kale.
3. Dib u celi iPhone qaabka screen guriga: Haddii aad u xaqiijiyay in icon Calendar si dhab ah loo bay uga screen guriga aad iPhone, waxaad isku dayi kartaa sidan. Resetting ka iPhone ee khariidad screen guriga ka dhigi kartaa oo kaliya qaabka screen guriga ee goobaha default warshad, ma beddelo xogta aad. Sidaa awgeed, waxa aan samayn wax walwal, ka dibna waxaad arki doonaa icon mar kale muuqday on your iPhone.
Tag: Settings> General> celi> celi Home Layout Screen.